Ndị uwe ojii mepere ọkụ n'oge ọgbaghara mgbochi mkpọchi na Rotterdam, 7 merụrụ ahụ
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ na -agbasa ozi Netherlands » Ndị uwe ojii mepere ọkụ n'oge ọgbaghara mgbochi mkpọchi na Rotterdam, 7 merụrụ ahụ
Na -agbasa Akụkọ Europe • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Crime • Akụkọ Ọchịchị • Ihe Ndị Ruuru Mmadụ • Akụkọ na -agbasa ozi Netherlands • News • ndị mmadụ • Safety • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a
Mmadụ 7 merụrụ ahụ ka ndị uwe ojii mepere mgbọ n'oge ọgba aghara mgbochi mkpọchi na Rotterdam.
Ndị ọchịchị Rotterdam nyere iwu mberede machibido ndị mmadụ ịgbakọ na mpaghara ahụ "iji mee ka ọha na eze nọrọ", ebe mechiri isi ọdụ ụgbọ oloko ya.
Mmadụ asaa merụrụ ahụ mgbe ngagharị iwe megide ndị Netherlands' Mmachibido iwu COVID-19 ewepụtara ọhụrụ ghọrọ ọgba aghara na ogbe ndịda Rotterdam, na-amanye ndị uwe ojii ịgbanye ndị ngagharị iwe ọkụ.
Ka ndị ọgbaghara na-agba ọsọ na mpaghara ịzụ ahịa etiti ọdụ ụgbọ mmiri ahụ, na-amụnye ọkụ ma na-atụba ndị ọrụ okwute okwute na ọkụ ọkụ, n'ihe onye isi obodo Dutch kpọrọ "ihe mgbagha nke ime ihe ike".
RotterdamOnye isi obodo Ahmed Aboutaleb kwuru n'isi ụtụtụ Satọde na "ọtụtụ oge ndị uwe ojii chere na ọ dị mkpa ịdọrọ ngwa ọgụ ha iji chebe onwe ha".
"[Ndị uwe ojii] gbagburu ndị ngagharị iwe, ndị mmadụ merụrụ ahụ," Aboutaleb kwuru. O nweghị nkọwa gbasara mmerụ ahụ. Ndị uwe ojii gbakwara mgbọ ịdọ aka ná ntị.
Ndị uwe ojii kwuru na nkwupụta na ngagharị iwe ahụ malitere n'okporo ụzọ Coolsingel butere ọgbaghara. Agbanyela ọkụ n'ọtụtụ ebe. Agbanyụrụ ọkụ ma ndị uwe ojii gbapụrụ ọtụtụ egbe ịdọ aka ná ntị”.
"Enwere mmerụ ahụ metụtara mgbọ ogbunigwe," ndị uwe ojii gbakwụnyere.
Ọtụtụ ndị uwe ojii merụrụ ahụ na ime ihe ike ahụ na ndị ọrụ jidere ọtụtụ mmadụ ma na-atụ anya ijide ndị ọzọ mgbe ha nyochachara ihe onyonyo vidiyo sitere na igwefoto nchekwa, Aboutaleb kwuru.
Ọnọdụ ahụ dara nke ukwuu ma emesịa, ma enwere nnukwu ndị uwe ojii.
Ndị uwe ojii Dutch kwuru na ebutere ngalaba sitere na mba ahụ ka “weghachi usoro” n'obodo ahụ.
Ihe ngosi akwadoro taa na Amsterdam megide mgbochi COVID-19 kagburu ọgbaghara ahụ na Rotterdam.
Ọ bụ otu n'ime ntiwapụ kacha njọ na ime ihe ike na Netherlands ebe ọ bụ na amachibidoro coronavirus nke mbụ n'afọ gara aga. N'ọnwa Jenụwarị, ndị ọgbaghara wakporo ndị uwe ojii ma gbaa ọkụ n'okporo ụzọ Rotterdam mgbe iwu iwu na-alọta malitere.
Netherlands laghachiri na ọdịda anyanwụ Europe mkpọchi akụkụ mbụ nke oge oyi otu izu gara aga. A na-atụ anya na mmachibido a, nke metụtara ụlọ nri, ụlọ ahịa na egwuregwu, ga-adịgide ma ọ dịkarịa ala izu atọ.
The Netherlands na-anwa ịchịkwa ọwa ọhụrụ nke coronavirus, yana ihe karịrị 21,000 ọhụrụ gbara ụnyahụ.
Gọọmentị Dutch na-atụle ugbu a ịwepụ ndị a gbara ọgwụ mgbochi na ụlọ mmanya na ụlọ oriri na ọṅụṅụ, na-enye ohere ịnweta naanị ndị gbachara ọgwụ mgbochi ma ọ bụ ndị gbakere na ọrịa ahụ.